Rivo Rakotovao atsy Afrika Atsimo : Homena tombon-dahiny ny famokarana -
AccueilRaharaham-pirenenaRivo Rakotovao atsy Afrika Atsimo : Homena tombon-dahiny ny famokarana
Ny fomba hahafahana mahazo vokatra haingana sy betsaka no anisan’ny navoitran’ny minisitry ny fambolena nandritra ny fifampiresahana sy ny fanatrehany nandritra ny fihaonamben’ny mpamatsy vola atsy Afrika Atsimo. Nambarany tamin’ izany fa « ny seha-pamokarana no tena naleha sy nojerena tamin’ny fanatrehana ity fivoriana ity’’. Ny mpamatsy vola rahateo, hoy izy, mahalala fa afaka ataon’i Madagasikara tsara ny mampivoitra ny tontolon’ny fambolena sy ny fiompiana izay tena hiompanan’ny ankabeazan’ny Malagasy. Manana ny rezika na ‘’potensialite’’ amin’ io resaka io rahateo Madagasikara, ka anisan’ny tena nojerena amin’ izany ny vary, ny katsaka izay nomena tombon-dahiny betsaka hoy ny minisitry ny fambolena Rivo Rakotovao satria dia betsaka ny tsena . Miara-dalana hatrany amin’ ny fambolena ihany koa ny fiompiana toy ny omby sy ny osy ary ondry izay tena betsaka mpitady ihany koa na tsena anatiny na ivelany . Ny fikatsahana hatrany ny fanatsarana ireo sehatra ireo hahafahana mambidi-bola betsaka sy hampitombo ny tombondahin’ny fidiram-bola ho an’ny tantsaha no ezaka hotratrarina hoy hatrany ny minisitry ny fambolena. Manaraka izany dia teo ny filazana nandritra ity fivoriana ity fa « tsy ny fanjakana intsony no hanokatra izany, fa ny anjaran’ny fanjakana dia manamora, manamarina ary miaro ny tombontsoan’ny rehetra anatin’ ilay izy’’. Ka noho izany dia nanambara ny minisitra fa anisan’ny laharam-pahamehana ny hidiran’ireo mpamboly sy mpiompy malagasy anatin’ ilay sehatra matihanina sy tsena hahafahany mamokatra bebe kokoa no hitadiavana ireo mpandraharaha lehibe .
Mba hahafahana manatanteraka izany dia hijerena hevitra ny hanomezana tany ho an’ny mpamboly toy ny tany be velarana, ny tanin’ny colon izay efa tsy misy mampiasa intsony. Nandritra izany ihany koa no nanentanan’ny minisitry ny fambolena ireo tantsaha mampiasa ny tany hoentin’ izy ireo mamokatra mba hangataka izany, matetika mantsy dia misy ireo olona izay mahazo izany fotsiny sy maka ny tanin’ ireo tantsaha mpamboly ireo rehefa ela ny ela. Ho an’ny ministeran’ny fambolena izao dia efa misy ny fanentanana hanosehana ireo olona hangataka izany, ary hiroso amin’ny atanatohatra mba hisoratan’ny tany iasan’izy ireo amin’ny anarany.
Notanterahina omaly tetsy amin’ ny Carlton Anosy ny adihevitra, nandraisan’ireo kandidà miisa 17 anjara. Nandritra ny adihevitra, dia samy nitondra ny programan’asany avokoa ny tsirairay. Niraisan’ny ankamaroan’ ireo kandidà nandritra ny famelabelarana nataon’izy ireo, ny ...Tohiny